राती सेक्स किन नगर्ने, बिहान किन गर्ने ? जान्नुहोस पुरा कुरा onlinedarpan.com
Wednesday 20th of October 2021 / 12:24:04 AM
हरेक प्राणीमा यौनेच्छाको चाहना हुनु शास्वत सत्य हो । यो प्रकृतिले दिएको उपहार हो । यौन सम्पर्कबाट मानिसलाई धेरै फाईदा हुन्छ । जसले यौन सम्पर्कलाई यौन यौन प्यास मेटाउने माध्यम मात्र ठान्छ जसका लागि यो समय उपयुक्त लाग्ला ।
तर जसले यौन सम्पर्कबाट शारीरिक तथा मानसिक फाईदा पनि लिन चाहन्छ भने अबदेखि बिहानको समयमा यौन सम्पर्क राख्ने बानी बसाले हुन्छ ।
त्यसैगरी यो कुरामा पनि ध्यान दिनुस की यौन सम्पर्क एक किसिमको मनोराजनात्मक खेल हो । एकैचौटी खेल खेल्दा बढी थकित भईन्छ त्यसैले यौन सम्पर्कको बेला कम्तिमा २० मिनेट सम्म बेड गेम खेल्नुपर्छ । जसले गर्दा दुवैजना तृप्त भईन्छ र यौनसम्भोगको मजा आउँछ ।
फाईदा के के छन् त
१. नियमित रुपमा बिहान मात्रै यौन सम्पर्क राख्नाले रक्तसंचारमा सुधार आउनुको साथै उच्च रक्तचापमा कमी आउँछ ।
७. स्कुल अफ मेडिसियसनका सोधकर्ताहरुका अनुसार बिहान गरिने यौन सम्पर्कले महिलालाई गर्भावस्थाको अवधिमा हुने पीडाको असर एकदम न्युन रुपमा मात्र पर्छ । तर याद राख्नुहोस् सोधकर्ताहरुको अनुसन्धानले बताए अनुसार हप्तामा तीन पटकभन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्नाले तपाईको शरीरको रोग प्रतिरोधक शक्तिमा ह्रास आउँछ ।